Fivoriana: Rindrambaiko fisoratana anarana azo antoka malalaka | Avy amin'ny Linux
Noho ny vaovao marobe sy miverimberina momba fantatra na mety ho marefo ny WhatsApp, iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, ataon'ny isam-batan'olona sy ny fikambanana, maro no nifindra monina nifanindry na tanteraka, nandritra ny fotoana ela ho an'ireo olona natolotray toy ny telegrama y Signal.
En Avy amin'ny Linux, tsy miresaka matetika isika WhatsApp, nanomboka Tsy lozisialy maimaim-poana na loharano misokatra. Izahay amin'ny ankapobeny dia manao izany hanondroana ny anao fahalementsika na hanao fampitahana amin'ny hafa, indrindra ny vahaolana malalaka sy malalaka. Toy ny ankehitriny dia hiresaka momba izany isika Session, izay asandratra ho a fampiharana fandefasana hafatra azo antoka.
Izaho manokana dia nijanona tsy nampiasa intsony WhatsApp Tamin'ny ankapobeny tamin'ity volana febroary 2020 ity, satria tsy dia nampiasaiko loatra izy io, ary na eo aza izany dia nandany data sy habaka kapila marobe, ankoatry ny zavatra ratsy hafa. Nampiasa intensive nandritra ny 3 taona aho telegrama ary ankehitriny tena tia sehatry ny fifandraisana ary / na fampiharana fandefasan-kafatra finday sy birao.
1 Ahenao kely na ialao ny fampiasana WhatsApp
2.1 Inona izany?
2.2 Fomba fiasa lehibe
2.3 Fametrahana amin'ny GNU / Linux
Ahenao kely na ialao ny fampiasana WhatsApp
Saingy, mihoatra ireo antony ireo, ahiahy na antony tena filaminana, taratry ny olona na fikambanana manerantany, dia tsy maintsy raisina. Ohatra, momba WhatsApp, vaovao azo itokisana no nipoitra avy amin'ireo fikambanana toy ny:
"Kaomisiona eropeana nangataka ny mpiasa ao aminy mba hampiasa ny Signal, fampiharana fandefasana hafatra miafina farany, ho fanandramana hampitombo ny fiarovana ny fifandraisan'izy ireo. Nipoitra tamin'ny tabilao fandefasan-kafatra anatiny ny torolàlana tamin'ny voalohan'ny volana febroary, nampandre ny mpiasa fa "Signal dia nofidina ho toy ny fangatahana natolotra ho an'ny fandefasan-kafatra imasom-bahoaka." Ny fampiharana dia ankafizin'ireo mpikatroka amin'ny fiainana manokana noho ny encryption farany-sy-farany sy ny haitao malalaka.". Media politika - 23/02/2020
"Fikambanan'ny Firenena Mikambana nanome toromarika ny tompon'andraikitra izy ireo mba tsy hampiasa WhatsApp hifandraisana. Raha nanontaniana ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, Antonio Guterres, fa efa nifandray tamin'ny printsy satro-boninahitra Saudi Arabia na mpitondra eran-tany mampiasa WhatsApp, dia nilaza ny mpitondra tenin'ny Firenena Mikambana Farhan Haq ny alakamisy teo: nahazo torolàlana tsy hampiasa WhatsApp, tsy tohanana ho rafitra azo antoka". Reuters Medium - 23/01/2020
Ary noho ny antony maro, fampahalalana, antony na vaovao toa anao izao, vaovao izao fampiharana hafatra mamakivaky ny besinimaro, indrindra ny malalan'ny Rindrambaiko maimaim-poana sy loharano misokatra, antso Session.
Araka ny filazan'ny mpamolavola ao aminy tranokala ofisialy, manokana ao "Taratasy fotsy" (Whitepapers):
Ho fanampin'izay, izy dia fampiharana noforonin'ny Orinasa Loki, fikambanana iray natsangana hamolavola ireo vokatra lozisialy mifantoka amin'ny fiarovana sy tsiambaratelon'ny mpampiasa azy.
Fampandrosoana loharano misokatra izy io.
Manaiky ny fandefasana hafatra am-peo sy ny firaketana amin'ny endrika maro izy.
Mampiasà encryption end-to-end izy izay manafoana ny fanangonana metadata saro-pady.
Mamela ny resaka amin'ny alàlan'ny vondrona misy olona hatramin'ny 10 na fantsona mpikambana tsy voafetra.
Tsy mirakitra metadata izy, satria tsy mitahiry, manara-maso na mirakitra ireo metadata misy hafatra.
Natao manokana io mba hanomezana fiainana manokana sy fahalalahana avo lenta kokoa, manoloana ireo endrika fanaraha-maso ankehitriny.
Izy io dia manana fampifanarahana fitaovana marobe, izany hoe mampiasa ID session ho an'ny telefaona sy solo-sainan'ny mpampiasa.
Izy io dia miasa amin'ny famoronana kaonty tsy mitonona anarana tanteraka, noho izany, tsy mila nomeraon-telefaona na mailaka hamoronana ID session.
Momba ny Rafitra miasa GNU / Linux, Session manome rakitra fametrahana ao anaty endrika AppImage eo ho eo 125 MB, izay misy ny stable version 1.0.2. Antony izay, ho mora be ny fametrahana azy ary hifanaraka amin'ny maro amin'ireo fizarana ataonay ankehitriny. HO AN'NY Android, Fotoana - Mpitondra hafatra manokana, azo alaina amin'ny kinova 10.0.3, miaraka amin'ny haben'ny 20 MB ary izany dia mila kinovan'ny Android 5.0 na avo kokoa.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Session», fampiharana fandefasan-kafatra azo antoka malalaka azo antoka, izay manana toetra tena ilaina ary mitovy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza kokoa, dia mahaliana sy mahasoa tokoa, ho an'ny iray manontolo «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Fivoriana: Rindrambaiko fisoratana anarana azo antoka malalaka
tatitra virtoaly dia hoy izy:
Hatramin'ny namoronana finday avo lenta dia sarotra tokoa ny tsy hanarahana azy, ary amin'ny alàlan'ny ampihimamban'ny Facebook (Whatsapp, Messenger, IG, sns) dia mamokatra angon-drakitra goavana izahay.
Mamaly amin'ny virtualreport
Miarahaba anao, VirtualReport. Misaotra tamin'ny hevitrao. Manaiky tanteraka aho.
raiber dia hoy izy:
Te-ho ao amin'ity fantsom-baovao ity aho havaozina miaraka amin'ny vaovao satria hitako fa mahaliana ilay rindrambaiko….
Valiny tamin'i Raiber
Toa mahaliana izany, na dia zavatra tiako ho fantatra aza ny fomba fanoratana ny application amin'ny GNU / Linux, satria avy eo ao amin'ny Electron (rafitry ny rindrambaiko) izy ireo ary ny solosaina taloha dia mila taona maro hanombohana azy. Mahafinaritra ihany koa ny mahafantatra raha ilaina ny fifandraisana mitohy amin'ny finday toy ny ataon'ny Signal, izay tena tsy mandeha amin'ny fahitako azy.
Liana te hahalala fotsiny aho dia andramako izany heh heh. Salama.
Miarahaba anao, Babela. Tena ilaina tokoa ny mahafantatra izany, fa na ao amin'ny Whitepaper na ao amin'ny faritra FAQ dia tsy asehony raha vita amin'ny elektron amin'ny fomba mazava na miharihary izy io. Mikasika ny iray hafa, heveriko fa amin'ny alàlan'ny fampiasana fampifanarahana fitaovana marobe sy ny fampiasana kaonty tsy fantatra anarana tsy miankina amin'ny nomeraon-telefaona, satria tsy misy fifandraisana mitohy amin'ny telefaona finday. Saingy tokony hizaha toetra tsara ianao mba hahitana ny fomba fiasany.
linuxito dia hoy izy:
Efa hitanao ve ny alalana fametrahana apetraka amin'ny Android? nolavina tanteraka.
Ny Protonmail dia miasa amina fampiharana fandefasan-kafatra, izany no ho tsara 😉
Mamaly an'i Linuxito
Joseph Marin dia hoy izy:
Te hanandrana aho
Valiny tamin'i Jose Marin
Nanambara i Microsoft fa misy ny Azure Sphere amin'ny ankapobeny
Tonga ny GIMP 2.10.18 miaraka amin'ny fanangonana fitaovana, fanamboarana ary maro hafa